အခုထက္ထိ စိတ္ထဲမွာ မွတ္မွတ္ရရ စြဲက်န္ရစ္ေနတဲ့ ဗုိလ္လုပဲြမ်ား (၂)
5 Nov 2018 . 5:17 PM
၂၀၀၀မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က (၇)တန္းအရြယ္ေလာက္ေရာက္ေနၿပီ။ ယူ႐ုိ-၂၀၀၀ ဗုိလ္လုပဲြကုိလည္း ေကာင္းေကာင္းမီလုိက္တယ္။ အဲဒီတုန္းက ရုပ္ျမင္သံၾကားလုိင္းေတြ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္ဗ်။ ကမၻာ႔ဖလားလုိ၊ ယူ႐ုိၿပိဳင္ပဲြလုိ ႏုိင္ငံတကာပဲြေတြ၊ ပရီးမီးယားလိဂ္ပဲြေတြကုိလည္း ပုံမွန္လုိလုိ ျပလုိ႔လည္း ေဘာလုံးပဲြေတြနဲ႔ အဆက္မျပတ္ခဲ့ရတာ။ ယူ႐ုိ-၂၀၀၀ တုန္းကလည္း ႐ုပ္သံက Free To Air ျပလုိ႔ ၾကည့္ခြင့္ရေသးတယ္။ ဘက္ဂီယုိ Roberto Baggio ေခတ္လြန္ အီတလီအသင္းမွာ ေတာ့တီ Totti ၊ နက္စတာ Nesta ၊ မာလ္ဒီနီ Maldini ၊ ေတာ္လ္ဒုိ Toldo၊ ဒယ္လ္ပီယာ႐ုိ Del Piero တို႔က ကိုယ့္အႀကိဳက္ ကစားသမားေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဗုိလ္လုပဲြကုိ အေသအခ်ာေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ေပမယ့္ ကုိယ့္အသင္းက ျပင္သစ္ကုိ ႐ႈံးသြားလုိ႔ ေနာက္ေန႔ ေက်ာင္းသြားေတာ့ ငိုရမလုိ၊ ရီရမလုိနဲ႔ေတာင္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ဒယ္လ္ဗက္ခီယုိ Delvecchio ဂုိးသြင္းလုိ႔ ေနာက္ဆုံးမိနစ္အထိ ဦးေဆာင္ၿပီးမွ နာက်င္အခ်ိန္ပုိမွာ ၀ီလ္ေတာ့ Sylvain Wiltord ၊ အခ်ိန္ပုိမွာ ထရက္ဇီေဂး David Trezeguet တို႔ ဂုိးသြင္းခဲ့လုိ႔ ကုိယ္ေတြလည္း အသည္းကဲြခဲ့ရတာပါပဲ။
ယူ႐ုိ-၂၀၀၀ ဗုိလ္လုပဲြၾကည့္ရန္ ႐ုပ္သံလင့္ခ္
ယူ႐ုိ-၂၀၀၀ေနာက္ပုိင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္လည္း မန္ယူပဲြကလဲြၿပီး က်န္တဲ့ပဲြေတြ သိပ္စိတ္မ၀င္စားျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ၂၀၀၂ ကမၻာ႔ဖလားဗုိလ္လုပဲြေတာင္ မၾကည့္ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ယူ႐ုိ-၂၀၀၄ က်ေတာ့ ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီး ပထမႏွစ္ဆုိေတာ့ ေကာင္းေကာင္းၾကည့္လုိ႔ရၿပီေလ။ ဒါေပမဲ့ အားေပးတဲ့အသင္း သိပ္မရွိေတာ့ဘူး။ ေပၚတူဂီနဲ႔ အုပ္စုအဖြင့္ပဲြမွာ အိမ္ရွင္ကုိ အႏုိင္ကစားခဲ့လုိ႔ ဂရိကုိေတာ့ အားေပးျဖစ္တယ္။ ဒါကလည္း အားနည္းတဲ့အသင္းကုိ အားေပးတဲ့သေဘာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ မထင္မွတ္ဘဲ ဗုိလ္လုပဲြအထိေရာက္ခ့ဲေတာ့ အဲဒီပဲြကုိ စိတ္၀င္စားသြားတယ္။ ဟရစၥေတ့စ္ Angelos Charisteas ၊ ဇာကုိရာကစ္ Theodoros Zagorakis ၊ ဒါးလက္စ္ Traianos Dellas နဲ႔ ဂုိးသမား ေခါင္းျဖဴႀကီး နီကုိပုိလီဒစ္ Antonios Nikopolidis တို႔ကုိ သေဘာက်ခဲ့တယ္။ ဗုိလ္လုပဲြမွာ ဟရစၥေတ့စ္က ေခါင္းတိုက္ၿပီး ေပၚတူဂီဘက္ကုိ အႏုိင္ယူခဲ့လုိ႔ အသင္းငယ္တစ္သင္း ဗုိလ္စဲြေစခ်င္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္လည္း ေက်နပ္စရာျဖစ္ခဲ့ရတယ္။
ယူ႐ုိ-၂၀၀၄ ဗုိလ္လုပဲြၾကည့္ရန္ ႐ုပ္သံလင့္ခ္
၂၀၀၅ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဗုိလ္လုပဲြ
ခ်န္ပီယံလိဂ္ဗုိလ္လုပဲြေတြထဲမွာ မန္ယူ-ဘုိင္ယန္ၿပီးရင္ ဒီပဲြက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ မွတ္မွတ္ရရျဖစ္ခဲ့တယ္။ မွတ္မိပါေသးတယ္။ အိမ္မွာ (၈)ေပစေလာင္းနဲ႔ ၾကည့္ခဲ့ရတာ။ လီဗာပူးလ္နဲ႔ေအစီမီလန္ပဲြ၊ ႏွစ္သင္းစလုံးက ကုိယ့္အႀကိဳက္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဗုိလ္လုပဲြဆုိေတာ့ ၾကည့္လုိက္တာပဲ။ ပထမပုိင္းမွာ ေအစီမီလန္က (၃)ဂုိးျပတ္ႏုိင္ေတာ့ အေဖက ဆက္မၾကည့္ပါနဲ႔ေတာ့ကြာဆုိၿပီး သြားအိပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မထူးပါဘူးဆုိၿပီး ဆက္ၾကည့္လုိက္တယ္။ တကယ့္မထင္မွတ္တာေတြ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လီဗာပူးလ္က ေခ်ပဂုိးေတြသြင္း၊ ပယ္နယ္တီနဲ႔ အႏုိင္ယူသြားေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ခဏေတာ့ ႀကိဳးၾကာနီပရိသတ္ျဖစ္သြားတာေပ့ါ။ ဒူးဒက္ Jerzy Dudek ႀကီး ဟုိေျပးဒီေျပးနဲ႔ ပယ္နယ္တီကာကြယ္ခဲ့တာကေတာ့ အႀကိဳက္ဆုံးပဲ။
၂၀၀၅ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဗုိလ္လုပဲြ ၾကည့္ရန္လင့္ခ္
အခုထက်ထိ စိတ်ထဲမှာ မှတ်မှတ်ရရ စွဲကျန်ရစ်နေတဲ့ ဗိုလ်လုပွဲများ (၂)
ဘောလုံးလောကမှာတော့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ ဗိုလ်လုပွဲတွေက မရေမတွက်နိုင်အောင်ပါပဲ။ အကောင်းဆုံးဗိုလ်လုပွဲလို့ဆိုရင် ဟိုပွဲလိုလို၊ ဒီပွဲလိုလို ရွေးချယ်ရခက်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက အခုအချိန်အထိ ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ ဗိုလ်လုပွဲ၊ မကြည့်လိုက်ရပေမယ့်လည်း ကျွန်တော့် စိတ်ထဲ အခုအထိ စွဲကျန်နေတဲ့ ဗိုလ်လုပွဲတွေကို ပရိသတ်တွေနဲ့အတူ ပြန်လည်ခံစားကြည့်ချင်ပါတယ်။ ဒါက နည်းနစ်သုံးသပ်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ အဲဒီအချိန်က ခံစားချက်ကို ကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ ပြန်ရေးတာဖြစ်လို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အမြင်တွေပါနိုင်တာမို့ အမြင်မတူတာရှိရင် ခွင့်လွတ်ပေးကြပါဗျား . . .
၂၀၀၀မှာတော့ ကျွန်တော်က (၇)တန်းအရွယ်လောက်ရောက်နေပြီ။ ယူရို-၂၀၀၀ ဗိုလ်လုပွဲကိုလည်း ကောင်းကောင်းမီလိုက်တယ်။ အဲဒီတုန်းက ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းတွေ တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျ။ ကမ္ဘာ့ဖလားလို၊ ယူရိုပြိုင်ပွဲလို နိုင်ငံတကာပွဲတွေ၊ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲတွေကိုလည်း ပုံမှန်လိုလို ပြလို့လည်း ဘောလုံးပွဲတွေနဲ့ အဆက်မပြတ်ခဲ့ရတာ။ ယူရို-၂၀၀၀ တုန်းကလည်း ရုပ်သံက Free To Air ပြလို့ ကြည့်ခွင့်ရသေးတယ်။ ဘက်ဂီယို Roberto Baggio ခေတ်လွန် အီတလီအသင်းမှာ တော့တီ Totti ၊ နက်စတာ Nesta ၊ မာလ်ဒီနီ Maldini ၊ တော်လ်ဒို Toldo၊ ဒယ်လ်ပီယာရို Del Piero တို့က ကိုယ့်အကြိုက် ကစားသမားတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဗိုလ်လုပွဲကို အသေအချာစောင့်ကြည့်ခဲ့ပေမယ့် ကိုယ့်အသင်းက ပြင်သစ်ကို ရှုံးသွားလို့ နောက်နေ့ ကျောင်းသွားတော့ ငိုရမလို၊ ရီရမလိုနဲ့တောင် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဒယ်လ်ဗက်ခီယို Delvecchio ဂိုးသွင်းလို့ နောက်ဆုံးမိနစ်အထိ ဦးဆောင်ပြီးမှ နာကျင်အချိန်ပိုမှာ ဝီလ်တော့ Sylvain Wiltord ၊ အချိန်ပိုမှာ ထရက်ဇီဂေး David Trezeguet တို့ ဂိုးသွင်းခဲ့လို့ ကိုယ်တွေလည်း အသည်းကွဲခဲ့ရတာပါပဲ။
ယူရို-၂၀၀၀ ဗိုလ်လုပွဲကြည့်ရန် ရုပ်သံလင့်ခ်
ယူရို-၂၀၀၀နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်လည်း မန်ယူပွဲကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ပွဲတွေ သိပ်စိတ်မဝင်စားဖြစ်တော့ဘူး။ ၂၀၀၂ ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲတောင် မကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ယူရို-၂၀၀၄ ကျတော့ ဆယ်တန်းအောင်ပြီး ပထမနှစ်ဆိုတော့ ကောင်းကောင်းကြည့်လို့ရပြီလေ။ ဒါပေမဲ့ အားပေးတဲ့အသင်း သိပ်မရှိတော့ဘူး။ ပေါ်တူဂီနဲ့ အုပ်စုအဖွင့်ပွဲမှာ အိမ်ရှင်ကို အနိုင်ကစားခဲ့လို့ ဂရိကိုတော့ အားပေးဖြစ်တယ်။ ဒါကလည်း အားနည်းတဲ့အသင်းကို အားပေးတဲ့သဘောပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ မထင်မှတ်ဘဲ ဗိုလ်လုပွဲအထိရောက်ခဲ့တော့ အဲဒီပွဲကို စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ ဟရစ္စတေ့စ် Angelos Charisteas ၊ ဇာကိုရာကစ် Theodoros Zagorakis ၊ ဒါးလက်စ် Traianos Dellas နဲ့ ဂိုးသမား ခေါင်းဖြူကြီး နီကိုပိုလီဒစ် Antonios Nikopolidis တို့ကို သဘောကျခဲ့တယ်။ ဗိုလ်လုပွဲမှာ ဟရစ္စတေ့စ်က ခေါင်းတိုက်ပြီး ပေါ်တူဂီဘက်ကို အနိုင်ယူခဲ့လို့ အသင်းငယ်တစ်သင်း ဗိုလ်စွဲစေချင်တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်လည်း ကျေနပ်စရာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
ယူရို-၂၀၀၄ ဗိုလ်လုပွဲကြည့်ရန် ရုပ်သံလင့်ခ်
၂၀၀၅ ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲ
ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲတွေထဲမှာ မန်ယူ-ဘိုင်ယန်ပြီးရင် ဒီပွဲက ကျွန်တော့်အတွက် မှတ်မှတ်ရရဖြစ်ခဲ့တယ်။ မှတ်မိပါသေးတယ်။ အိမ်မှာ (၈)ပေစလောင်းနဲ့ ကြည့်ခဲ့ရတာ။ လီဗာပူးလ်နဲ့အေစီမီလန်ပွဲ၊ နှစ်သင်းစလုံးက ကိုယ့်အကြိုက်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲဆိုတော့ ကြည့်လိုက်တာပဲ။ ပထမပိုင်းမှာ အေစီမီလန်က (၃)ဂိုးပြတ်နိုင်တော့ အဖေက ဆက်မကြည့်ပါနဲ့တော့ကွာဆိုပြီး သွားအိပ်တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ မထူးပါဘူးဆိုပြီး ဆက်ကြည့်လိုက်တယ်။ တကယ့်မထင်မှတ်တာတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီး လီဗာပူးလ်က ချေပဂိုးတွေသွင်း၊ ပယ်နယ်တီနဲ့ အနိုင်ယူသွားတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခဏတော့ ကြိုးကြာနီပရိသတ်ဖြစ်သွားတာပေ့ါ။ ဒူးဒက် Jerzy Dudek ကြီး ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ ပယ်နယ်တီကာကွယ်ခဲ့တာကတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ။
၂၀၀၅ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲ ကြည့်ရန်လင့်ခ်